टेस्ला आरोप लगाइएको पूर्व कर्मचारीलाई गोप्य डाटा चोर्नेमा - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
जनवरी 23, 2021 जनवरी 23, 2021 बेनेडिक्ट कासिगारा युरोप, विशेष समाचार, gigs, ग्लोबल विश्व, समाचार लेख, उत्तर अमेरिका, नर्वे, प्रविधि
यी सामग्रीहरूको खतिलोभको कामसँग कुनै सरोकार छैन।
"मलाई कसैले ड्रपबक्स प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ" भनेर एलेक्स खतिलोभले भने।
टेस्ला प्रतिनिधिहरुका अनुसार खतिलोभले करीव २ 26 हजार फाईलहरू चोरेका थिए। उनले कथित रूपमा यसलाई लुकाउने र सबूतहरू हटाउने कोशिस गरे। यस महिनाको शुरूमा खतिलोभलाई निकालिएको थियो।
नर्वेले आर्कटिकमा तेलको लागि ड्रिलिंग अनुमति दिन्छ।
अमेरिकी कम्पनी टेस्ला, जसले इलेक्ट्रिक कारहरू उत्पादन गर्दछ, यसको पूर्व कर्मचारी एलेक्स खतिलोभलाई आरोप लगाएको छ गोप्य जानकारी चोर्न को। उत्तरको क्यालिफोर्नियाको उत्तरी जिल्लाको लागि संघीय अदालतको इलेक्ट्रोनिक डाटाबेसमा शुक्रबार दाबी गरिएको बयान दायर गरिएको थियो।
टेस्ला, Inc. एक अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन र सफा उर्जा कम्पनी हो जुन Palo Alto, क्यालिफोर्नियामा आधारित छ। टेस्लाको हालको उत्पादनहरूमा इलेक्ट्रिक कारहरू, ब्याट्री उर्जा भण्डारण घर देखि ग्रिड स्केल, सौर प्यानल र सौर छत टाइल, साथ साथै अन्य सम्बन्धित उत्पादनहरू र सेवाहरू सामेल छन्।
कागजातमा भनिएको छ कि खतिलोभ कम्पनीले डिसेम्बर २ 28, २०२० मा सफ्टवेयर डेभलपरको रूपमा भाडामा लिएका थिए। त्यसको तीन दिनभित्रै उनले टेस्लाको बन्द आन्तरिक नेटवर्कबाट हजारौं अत्यन्त गोप्य प्रोग्राम फाईलहरू चोरी गर्न थाले र उनीहरूलाई क्लाउडमा उनको खातामा सारिदिए। डाटा भण्डारण ड्रपबक्स
टेस्लासँग यसमा पहुँच छैन र हेर्न सक्नुहुन्न। यी सामग्रीहरूको खतिलोभको कामसँग कुनै सरोकार छैन।
"मलाई कसैले ड्रपबक्स प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ" भनेर एलेक्स खतिलोभले भने। "मलाई थाहा छैन किन तिनीहरू यो संवेदनशील जानकारी दावी गर्छन्, मसँग कुनै संवेदनशील जानकारीको पहुँच छैन।"
दावीको बयानले ऊ कुन देशको नागरिक हो भनेर तोक्दैन। विशेषज्ञ कथित रूपमा एलेक्स टिलोभ र साबिर खतिलोभ नामबाट पनि परिचित छन्। उहाँ दाबीको बयानका अनुसार क्यालिफोर्नियाको सान ब्रुनोमा बस्नुहुन्छ।
संघीय अदालतले शुक्रवार खतिलोभलाई कुनै पनि हालतमा फाईलहरू वितरण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको फैसला सुनायो। ऊ रिपोर्ट गर्न पनि बाध्य छ कि उसको सबै मिडिया छ जसमा टेस्लाको स्वामित्वको डाटा भण्डारण हुन सक्छ। "कसैले पनि मलाई ड्रपबक्स प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ" भनेर खतिलोभले भने। "मलाई थाहा छैन किन तिनीहरू यो संवेदनशील जानकारी दावी गर्छन्, मसँग कुनै संवेदनशील जानकारीको पहुँच छैन।"
खतिलोभले न्यूयोर्क पोष्ट पत्रिकालाई दिएका एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए कि उनले टेस्लाबाट कुनै सूचना चोरी गर्न खोजेका थिएनन्। उनले आश्वासन दिए कि उसले अनजानमै ड्रपबक्स सेवामा एउटा फोल्डर प्रतिलिपि गरिसकेको थियो र यसको सामग्रीहरू बारे सचेत छैन।
टेस्ला एक अमेरिकी उद्यमी एलोन मुस्किन २०० 2003 द्वारा स्थापित गरिएको थियो। सुरुमा कम्पनीले इलेक्ट्रिक सवारी उत्पादनको लागि विशेष काम गर्‍यो, तर पछि यो ऊर्जा भण्डारण प्रणालीको निर्माणमा पनि संलग्न भयो।
नर्वे आर्कटिकमा तेल को लागी ड्रिलिंग को अनुमति दिन्छ
नर्वे अन्वेषण गर्न अनुमति प्रदान गर्न चाहन्छ यस वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा आर्कटिकमा तेलको लागि वातावरणीय विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरे पनि। नर्वेको तेलमन्त्री टीना ब्रोले संसदमा टिप्पणीको क्रममा भने कि देश आर्कटिकमा सीमा क्षेत्रमा तेल र ग्यास अन्वेषणका लागि अनुमति प्रदान गर्ने योजनाको साथ अघि बढिरहेको छ।
नर्वेको सरकारले नोभेम्बरमा भनेका छ कि त्यसले नौ समुद्री क्षेत्रमा ड्रिलि perm अनुमतिहरू प्रदान गर्न सक्छ, जसमध्ये अधिकांश आर्कटिक बेरेन्ट सागरमा छन्। यो अन्वेषण कार्यहरूमा ठूलो विस्तारको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने योजनाहरूको सन्दर्भमा आउँदछ।
तेल र ग्यास उद्योग नर्वेमा सबैभन्दा ठूलो र सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण हो; तिनीहरूले ठूलो मूल्य उत्पादन र सयौं हजारौं मानिसहरूलाई रोजगार। नर्वेले आर्कटिकमा फेब्रुअरी २ on मा तेल र ग्यासका लागि अन्वेषण गर्न अनुमति पत्रको लागि आवेदनहरू बुझाउने अन्तिम म्याद तय गरेको छ।
पर्यावरणविद्हरूले आलोचना गरे
अर्कोतर्फ, वातावरणीय समूहहरू भन्छन कि नर्वेले आर्कटिकमा तेल र ग्यासको खोजीमा कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसँग मेल खाएको छैन जुन नर्वे सरकारले अस्वीकार गरेको छ।
नर्वेमा विपक्षी सोशलिस्ट पार्टीका संसद सदस्य लार्स हाल्टब्रुकनले भने कि नर्वेले यी अनुमतिपत्रबाट प्राप्त गर्ने उत्पादनले ग्लोबल वार्मिंग सीमित पार्ने पेरिस सम्झौतामा तय भएका लक्ष्यहरूसँग टुंगिने छ।
उत्खनन निर्णयको अनुसन्धान
पोलर पायोनियर वाइल्ड क्याट ड्रिल गर्दै जसले २०११ मा बारन्ट्स सागरमा जोहान कास्टबर्ग क्षेत्र पत्ता लगायो।
नर्वेले भर्खरै आर्कटिकमा तेल र ग्यासको खोजी गर्ने निर्णयको अनुसन्धान खोल्ने घोषणा गर्‍यो। किनभने यो सरकार द्वारा अपनाईएको स्वच्छ उर्जा निर्णयसँग विरोधाभास हुन्छ।
लेखा परीक्षण र संवैधानिक मामिलासम्बन्धी नर्वेलीय स्थायी समितिले बेरेन्ट सागरको दक्षिणपूर्वी भाग तेल र प्राकृतिक ग्यास अन्वेषण गतिविधिका लागि खोलिएको छलफलको क्रममा संसद्बाट आधारभूत सूचना लुकेको छ कि छैन भनेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
तेल उत्पादन प्रतिबन्धित
नर्वेले आफ्नो तेल उत्पादन धेरै पटक प्रतिबन्धित गरेको छ विगतका वर्षहरूमा १ 1986 1990 देखि १ 1998 2000 ० सम्म र फेरि १ 2002 3.1 to देखि २००० सम्म र २००२ को पहिलो आधामा। देशको वार्षिक कच्चा तेलको उत्पादन २००० मा प्रति दिन 2000..१ मिलियन ब्यारेलमा पुगेको थियो जुन -० वर्षको न्यूनतम १. 30. मिलियनमा झरेको थियो। २०१ in मा प्रति दिन ब्यारेल।
यद्यपि, सरकारले कच्चा तेल उत्पादन २० 2२ सम्ममा प्रति दिन २० लाख ब्यारेलमा सुधार हुने अपेक्षा गरेको छ, नयाँ प्रमुख निक्षेप सेवामा प्रवेश गरेपछि एलएनजी वा कन्डेनसेट गन्ती गरिरहेको छैन। अर्कोतर्फ, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेनले आर्कटिकमा राष्ट्रिय वन्यजीवन शरणार्थीमा तेल र ग्यास क्षेत्रको लीजहरू अस्थायी रूपमा रोक्नको लागि आफ्नो उद्घाटनको लगत्तै निर्णय जारी गरे।
एलेक्स खतिलोभ सांप्रदायिक समाचार गोप्य डेटा डाटा चोरी ड्रपबक्स ड्रपबक्स (अमेरिका) संघीय अदालत एलएनजी तेल ड्रिलिंग तेल उद्योग tesla